I-Samsung Galaxy A9 ngoku iyafumaneka eSpain | I-Androidsis
Isamsung isandula ukubhengeza ukufika kwe-smartphone yokuqala yehlabathi ngeekhamera ezine zangasemva ngo-Okthobha odlulileyo kwaye, ukuqala namhlanje, Ngoku inokuthengwa eSpain!
Sithetha ngayo Galaxy A9, isiphelo sendlela esaphule imigaqo ngokufaka iikhamera ezine zangasemva, into engazange yabonwa ngaphambili kwi-smartphone. Ngamnye unomsebenzi othile, ukusuka kwiilensi zomnxeba ukuya kwi-engile ebanzi, ukuvumela ukufezekisa imifanekiso ebukhali, kwaye konke ngaphandle kokungabikho kokukhanya okunokubakho kwindalo esingqongileyo, okanye kufezekise isiphumo se-bokeh esithandwayo kunye nezobugcisa.
Enkosi ngeelensi oqhayisa ngazo, I-Galaxy A9 liqabane elifanelekileyo kuye nabani na othanda ukufota okanye abona basebenzisi basebenzisi bezonxibelelwano, kuba baya kuba nakho ukubonisa umhlaba ngendlela abayibona ngayo nangendlela engenakuthelekiswa nanto.
UCelestino García, uSekela Mongameli we-Samsung Spain, uthe:
“Besinomdla wokubonisa abalandeli beSamsung ukuba ukuzibophelela kwethu kubo kunamandla kunangaphambili, kwaye ukufika kweGalaxy A9 linyathelo lokuqala elisa kubudlelwane obusondeleyo. Sifuna ukubanika amava awodwa ngexabiso lokhuphiswano, yiyo loo nto sikholelwa ukuba i-Galaxy A9 iyakufezekisa konke abakulindeleyo kunye neemfuno zabo ”.
I-Samsung Galaxy A9 inefayile ye- I-6.3-intshi ye-diagonal infinity Display ene-FuHD + isisombululo kunye netekhnoloji ye-Super AMOLED ebonelela ngenqanaba eliphezulu lokuthelekisa kunye nemibala enamandla ngakumbi.
Ukugqitywa kwayo premium Imele ikhava yayo yeglasi eyi-3D, efumaneka ngemibala emithathu eyahlukeneyo: ICaviar emnyama, iLamade eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neBubblegum Pink, ukuziqhelanisa ngcono nobuntu kunye nokungcamla komsebenzisi ngamnye.
Ixabiso kunye nokufumaneka kweGalaxy A9 eSpain
I-smartphone entsha yoMzantsi Korea ine Ixabiso eliphakanyisiweyo lama-euro angama-599,00, kwaye ungayifumana kwiivenkile eziqhelekileyo zomzimba nakwiwebhusayithi esemthethweni ye-Samsung.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Samsung Galaxy A9 ngoku iyafumaneka eSpain